सावधान ! ठेलामा पानीपुरी खादा क्यान्सरको खतरा | Kendrabindu Nepal Online News
सावधान ! ठेलामा पानीपुरी खादा क्यान्सरको खतरा
१२ श्रावण २०७५, शनिबार १३:१९
तपाई कतै रोडको छेउतिर बसेर पानीपुरी खाने गर्नुहुन्छ भने अब सतर्क हुनुहोस् । यसरी पानीपुरी खाँदा विभिन्न समस्याहरुले सताउने गर्छ । पानीपुरी खाएर बिभिन्न रोगहरुलाई निम्ता हामी आफैले दिँदै आइरहेका छौँ । हामीहरु ठेलामा बेचिने पानीपुरी अझ धेरै खाने गर्छौँ ।
तर यसमा हाम्रो शरीरलाई असर गर्ने ग्याँस कति हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनौ । अझ पानीपुरी बेच्ने मान्छेले फोहोरी हातहरुले बनाएर दिएको पानीपुरी घिन नमानी र अलिकति पनि सँकोच नगरी खाने गर्छौँ । तर यसको प्रभावले हामीहरु क्यानसरको सिकार भइराखेका हुन्छौ ।
धनियाँ र चटनीको ठाउँमा आर्टिफिसियल र बासी चिजहरुको प्रयोग हुने गर्छ । यति धेरै पानी बनाएर थोरै रकममा बेच्न कसैले पनि राम्रो चिजहरुको प्रयोग गर्दैनन् । यिनै कच्चा सामाग्रीहरुको प्रयोगले हामीलाई क्यान्सर हुने गर्छ । बजारका पानीपुरीमा प्रयोग हुने रँग हम्रो शरीरमा गएर जम्ने गर्छ र यही जमेको कलरको असरले हामीलाई क्यान्सर हुने गर्छ । ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरुले पानीपुरी खान हँुदैन् ।
किनभने धेरै पटक प्रयोग गरिएको तेलमा पानीपुरी बनाइएको हुन्छ । साथै धेरै नुनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले क्यान्सरलाई झनै निम्ता दिने काम गर्छ । त्यसै कारणले पानीपुरी खान स्वास्थ्यका लागि उपर्युक्त हँदैन् ।
Prevतीन दिनसम्म देशैभर वर्षा
निर्माण शुरु भएको चार वर्षमा पनि पुल निर्माण भएन्Next
३ महिला जो चटपटे बेचेरै १ लाख कमाउँछन् (भिडियो रिपोर्ट)